Miserasera aterineto any amin’ny toerana ho an’ny daholobe ao Kiobà · Global Voices teny Malagasy
Miserasera aterineto any amin'ny toerana ho an'ny daholobe ao Kiobà
Nandika (en) i Marianna Breytman
Voadika ny 18 Septambra 2015 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny English, English, Español
Famantarana WiFi ao Havana taloha, Kiobà. Sary avy amin'i Nano Anderson, nalaina tao amin'ny Flickr, Lisansa CC BY 2.0
Amin'ny 10 ora alina fa toy ny hipoaka ao amin'ny zaridaina Agramonte, ao afovoan-tanàna Kiobàna ao Camagüey. Feno olona mifantoka mafy amin'ny efijery fotsy manazava ny aizina noho tsy fisian'ny jiro an-dalambe ao an-jaridaina. Tsy ampy ho an'ny rehetra ire dabilio rehefa alina. Mandritra ny andro, mandoro ireo izay mba te hiditra aterineto ao ny masoandro. Raha te-hipetraka any anaty fisotroana kafe mahazo Wifi ianao dia tsy maintsy mividy zavatra sy mandoa vola amin'izany.
Afaka mandray olona hatramin'ny 100 samy mampiasa aterineto ny La Rampa, lalana afovoan-tanànan'i Havana. Ao amin'ny zaridainam-bahoaka misy Wifi ao Camagüey, nidina hatrany amin'ny 50 isa fotsiny izany.
“Efa nahatratra faratampony izany,” hoy i Alejo, bilaogera ao an-toerana tamiko. “Fantatrao izany rehefa mahita hafatra milaza ianao fa tsy mety voavaly ny fangatahanao rehefa mampiditra ny solonanarana sy ny tenimiafinao ianao,” hoy izy manampy.
Raha hampiasa aterineto ao Kiobà, dia tsy maintsy misoratra anarana amin'ny kaonty ao amin'ny ETECSA, renin'ny orinasam-pifandraisandavitra rehetra ao amin'ny firenena ianao. Misy fomba roa ahazoana miditra amin'ny kaonty: afaka mividy karatra famahanana Nauta ianao, na mahazo fifanarahana amin'ny ETECSA ahitana fiseraserana aterineto sy mailaka. Amin'ireo fomba roa ireo, angatahana ianao mba hampiseho ny mombamomba anao manokana ofisialy nomen'ny fanjakana, na karapanondro izany na pasipaoro.
Manome tolotra fidirana amin'ny aterineto amin'ny vidiny manomboka amin'ny 4,50 dolara ka hatramin'ny 10 dolara isan'ora ireo trano fampiatranoam-bahiny, ary tsy mba mangataka izay mombamomba anao manokana. Saingy amin'ny karama ankapobeny isam-bolana 20 dolara, dia sarotra hoan'ny ankamaroan'ny Kiobàna izay fomba fidirana amin'ny aterineto izay.
Telo herinandro lasa izay, mitentina 2.50 dolara ny karatra Nauta eny amin'ny varomaizina. Amin'izao fotoana izao, miparitaka eny amin'ny varomaizina mirongatra ao La Rampa ny karatra fahana amin'ny vidiny 3 dolara rehefa hiditra aterineto eny amin'ny faritra misy Wifi. Any amin'ny magazay ETECSA mivarotra antsinjarany , mitentina 2 dolara ny vidin'izany, saingy tsy maintsy miandry ao anaty filaharambe miaraka amin'ireo olona mila mamahana finday amin'izany, na mandoa ny faktioran'ny telefaonina, na mividy zavatra isan-karazany.
At present, Cubans experience the Internet in fits and starts. It is expensive and short-lived.
Amin'izao fotoana izao, miaina aterineto mitsitapitapy ny Kiobàna. Lafo sy tsy mateza izany
Tsy ampy faritra misy Wifi ao an-tanànan'i Guanabo, tahaka izany koa ao Havana, saingy nanjary toeram-pihaonana malaza eo amin'ny tanora ny toeram-pivarotana ETECSA manana solosaina telo sy fitaovana famerana maripana – toerana tena mihaja raha oharina amin'ny Casino Deportivo mpifanolo-bodirindrina aminy. Efa manana kaonty Facebook i Jennifer ary mitahiry am-pireharehana ny pejy ao amin'ny aterinetony mba hampisehoana izany amin'ny reniny, amin'ny solosainy tsy misy aterineto. “Inona no tena jerenao indrindra amin'izao fotoana izao?” Hoy aho nanontany azy. Nampiseho ahy sary nalaina tamin'ny pejin'ny Los Angeles, tarika mpihira malaza iray izy.
Ao La Rampa, Guanabo, Camagüey, na Casino Deportivo, toa zavatra mitovy no jeren'ny rehetra. Ny aterineto ao Kiobà – ao amin'ny toerana fidirana aterineto hoan'ny rehetra – dia voafetra amin'ny tambajotra sosialy (Facebook), tolotra mailaka sasany, lahatsary sy fampiharana karajia (chat) ihany. Zara raha mahavita ny servisy finday lafo vidy sy tsy mahomby izany. Tahaka ny hoe vao indray mandeha ihany no niserasera tamin'ny aterineto, ary fahadisoana ny fidirana amin'izany. Saingy rehefa mandehandeha amin'ireo toerana ireo dia afa-mahita ny fomba fanjifana (fampiasana aterineto) mahazatra amin'ny ankapobeny.
Tanora Kiobàna miditra aterineto ao La Rampa, Havana. Sary avy amin'i Elaine Díaz.
Ampahany ihany amin'ny olana ny tsy fahafahana miditra feno amin'ny aterineto. Lafo dia lafo ny vidiny. Tsy misy safidy afa-tsy ny mitorovoka eny amin'ny tohatra, sisin-dalana sy ny lalana ho an'ny mpandeha tongotra rehefa miserasera tsy mampahazo aina eny amin'ny faritra misy aterineto. Ary tsy misy ny tetipanorona maty paika amin'ny fampianarana ny daholobe, ankoatra izay ampianarina ny mpianatry ny oniversite sy amin'ireo miasa amin'ny sehatra manan-danja fampandrosoana ara-tsiantifika ao amin'ny firenena. Mahatonga ny ankamaroan'ny Kiobana mpiserasera hiditra aterineto mihoatra noho izay tena ilaina ireo anton-javatra ireo
Amin'izao fotoana izao, miaina aterineto mitsitapitapy ny Kiobàna. Lafo loatra sy lany vetivety. Fampiasam-bola manokana, ary tsy maintsy mitondra tombontsoa sahaza hoan'ireo manao azy. Dokambarotra marobe no alefa ao amin'ny Revolico (tranokalam-barotra tsy ofisialy ao Kiobà, mitovy amin'ny craigslist) izay manome servisy fitantanana kaonty Facebook manokana. “Misy lehilahy iray monina eo akaikin'ny tranoko izay mitantana kaontin'ankizivavy telo manana vahiny mpifanoratra amin'izy ireo. Mamaly ny hafatra ru zavavy dia ralehilahy no mandefa izany” hoy ilay mpiserasera tsy te-ho fantatra tamiko.
Eo amin'ny zoron-dalana manaraka, manokatra ny kaonty Facebook-ny ny tovovavy iray. Mampiseho sarintava manafintohina milaza hoe “sexy aho” izany. Mihevitra ny ray aman-dreniny fa any amin'ny zaridainam-bahoaka miaraka amin'ny namany izy, izay marina raha ara-teknika. Saingy tsy nisy olona nanazava tamin'ny ray aman-dreniny fa rehefa ao anaty aterineto ianao, dia any amin'ny toerana marobe amin'ny fotoana iray, ary mety mampidi-doza ny sasany amin'ireo toerana ireo. Na angamba efa nahita izany tamin'ny fahitalavi-panjakana izy ireo, tatitra mamaritra izany ho loza mety ateraky ny aterineto, tahaka ny zavatra mitranga any amin'ireo firenena lavitra hafa, fa tsy ao Kiobà mihitsy, na ho an'ny zanak'izy ireo.
Manampy izany ny fahatsapana maimaika vaovao. Ao Kiobàn'ny taona 2015, zara raha mamaha ireo fanamby maharary indrindra izay nahatratra ny faratampony tamin'ny taona 1990 ny aterineto: Ny fifanakaikezan'ny vahoaka. Amin'ireo Kiobàna efa ho roa tapitrisa monina ao Etazonia ary an'hetsiny ny fianakaviana tafasaraka noho ny fifindramonina, dia mampihena ny sakana apetraky ny visa sy ny halafon'ny tapakila fiaramanidina ny fidirana amin'ny aterineto. Mampiray vahoaka izany. Izany angamba no tena zava-dehibe ankehitriny.
Hisy ny fotoana hanaovana zavatra hafa.
4 andro izayBolivia